Can nwere ike ịmekọrịta mgbakwunye yana AdSense? - Mụta ịde blọgụ ọkachamara
Ụdị ọkwa:Adsense / Mgbakwunye Ahịa / Nweta ego n'ịntanetị
Oge ịgụ ihe:5 nkeji na -agụ
Nwere ike iji mgbakwunye mgbakwunye yana AdSense ọnụ na blọgụ gị ma ọ bụ weebụsaịtị. Ọ bụ nnukwu ụzọ iji melite monetize gị blog. Na-erite uru na nke abụọ, ịnweta ọrụ site na ịkwalite ngwaahịa nke gị ma ọ bụ nke ndị ọzọ yana ị nweta ego site na igosipụta ọkwa ọkọlọtọ dị iche iche.
Google na-enye gị ohere itinye njikọ nkwado ngwaahịa gị yana mgbasa ozi ngosi. Nke a bụ nseta ihuenyo.
Kọkọrịta ahụmahụ m, mgbe amalitere blog m ogologo oge, Naanị m na-ejedebe naanị na AdSense. Ka oge na-aga, as I improved my knowledge and getting better in the blogging field.
N’oge na-adịghị anya m ghọtara, ị nwere ike ịme ego site na AdSense ruo nnukwu 5000+ dollar kwa ọnwa ma ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ nde okporo ụzọ dị mma ma ọ kwesịrị isi na US, UK, Canada dị ka mba.
Dị ka m bụ na mbụ ogbo, o siri ezigbo ike ịnweta ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị ọbịa ahụ.
AdSense na Amazon, Mgbakwunye mgbasa ozi ndị ọzọ na otu Webpage
Adsense na Mgbakwunye
Mgbakwunye Ahịa na Netwọk Mgbasa Ozi Ndị Ọzọ -dSense Ọzọ
N'oge ahụ, amalitere m ilele nhọrọ ndị ọzọ iji melite ego m na-enweta na ntanetị. N'ebe ahụ ka m hụrụ otu gọọmentị enyemaka Google na-akọwa ikike nke mmekọ mmekọ yana AdSense abụghị ụdị mmebi iwu ahụ n'agbanyeghị agbanyeghị ọrụ na amazon ma ọ bụ ndị mmekọ ndị ọzọ..
Mgbe nke ahụ mechara, M na-edebanye aha ozugbo maka mmemme mmekọ amazon. N'oge ahụ blọọgụ m na-enweta ọnụọgụ ole na ole nke ndị ọbịa na-anaghị anakwere ịnata ezigbo ego sitere na AdSense.
Ọbụna ebe a, Mụ onwe m na-atụ aro gị ma ọ bụrụ na ị bụ onye mbido na ubi mmiri a, kama ilekwasị anya na AdSense, ị kwesịrị ị na-amalite na Mgbakwunye ahịa. Mgbe nke ahụ gasịrị, sonye na AdSense mgbe otutu onwa gasiri i malitere inwe onu ogugu ndi nleta.
Cannot nweghi ike iji tụnyere mgbakwunye mgbakwunye na AdSense. Mgbakwunye ahịa bụ ụlọ ọrụ na-eto eto nke na-enye gị ohere ị nweta 1000 + dollar mfe ị ga-eji obere ego nke okporo ụzọ. Nke a bụ ihe akaebe nke onwe m maka ịnweta ego naanị 100 gbakwunye okporo ụzọ kwa ụbọchị.
Ọ ga-eju gị anya ịmara na ọ bụrụ na naanị otu narị ndị ọbịa kwa ọnwa gaa na weebụsaịtị m ebe enweghị ohere ọ bụla ị ga-enweta $70 kwa ọnwa site na AdSense.
Otú ọ dị, Ọ bụ mkpebi amamihe dị na ya iji nweta nnabata nke AdSense ma nwee mgbakwunye mmekọ yana ya. Maka na ị naghị efunahụ ihe ọ bụla kama ị na-enwetakwu dollar. N'agbanyeghị ma ọ dị ole na ole ma ọ bụ ole na ole.
AdSense nke taa adịghị ka afọ ndị gara aga, ị ga-etinye ọtụtụ ọrụ ike iji nweta ezigbo ego na ọnwa. Google AdSense bu ngwa ahia nke Google. Ọ bụrụla ihe amamihe dị na ya na ọ chọrọ ọtụtụ mbọ na nkwụghachi, ị gaghị enweta otu narị percent ugbu a.
Ihe na-eme gburugburu ya? Ọfọn, nkọwa dị ọtụtụ mana ebe a onwe m na-atụ aro gị debanye aha maka Ezoic.
Ezoic bụ otu n'ime nyiwe ndị yiri ya na AdSense nke na-eji teknụzụ ọgụgụ isi ya na-egosipụta koodu AdSense. Maka inweta ihu ọma Ezoic ị ga-agbaso iwu niile nke AdSense ma nwee nnabata ya. ọ bụrụ na inwere, ị ga-erubere nke ọma maka mgbasa ozi Ezoic.
Yabụ kedu ihe dị iche n'agbata ego EZOIC na AdSense, ka m jiri ihe omuma tuo ya. Ka e were ya ma ọ bụrụ na ị na-enweta 2000 ihu peeji site na United States, n'ihe gbasara AdSense, ị ga-naanị ihe fọrọ nke nta anyị $5 kwa puku echiche ma ọ bụrụ na ị mejuputa mgbasa ozi Ezoic na weebụsaịtị gị ị ga - enwe 10 ka 12 dollar nwere ike ịbụ karịa nke ahụ dị mfe.
Y’oburu n’inwe ihe ịga nke ọma n’ịkwọ ụgbọala 50000 ọbịa na 100000 ngosi peeji nke kwa ọnwa ị nwere ike ịgafe na nhazi dị mma dị ka ndị mgbasa ozi na-abịa ma ọ bụ Na-achọ. Platformszọ nyiwe abụọ ndị a bụ n’ezie karịa ihe ị tụrụ anya ya.
Na mkpokọta, ọ nwere ekele ma ọ bụrụ na ị na-eme ụzọ iji nweta ego ma site na AdSense yana site na mgbakwunye mmekọ. Nwere ike ịme ya na blọọgụ ma ọ bụ weebụsaịtị enweghị mmebi iwu ọ bụla. Yana ya, I kwesịkwara ịtụle ụzọ ndị ọzọ AdSense dị ka Ezoic, media osisi vaịn na mgbasa ozi ọma, wdg. Nke a ga-aba uru karịa na agaghị emechu gị ihu.
Ego ole ka ị nwere ike iji Google AdSense nweta
Ọ kwesịrị na m ga-azụta SSL n'aka onye ọbịa m?
Enwere m ike ịzụta ngalaba aha ma jiri ya Ebe ọ bụla?
Nke gara agaEgo ole ka ị nwere ike iji Google AdSense nweta?
Ọzọ PostỌ bụ ahịa Mgbakwunye Amazon kwesịrị ya?